हरिभक्त कटुवालले आफ्नै भाइलाई लेखेको चिठी ! - Bulbul Samachar
bulbul शुक्रवार, असार १८ गते 190 views
धेरै विख्यात/कुख्यात व्यक्तिहरूले लेखेका चिठी मध्ये हरिभक्त कटुवालले आफ्ना भाइलाई लेखेको यो चिठीले जस्तो दिलदिमागमा हानेको अन्य चिठी छैन । आफैंमा कविता हो यो चिठी, आफैंमा विद्रोह हो । सबै कुरा जान्न यही चिठी पढ्नुहोस् ।
सेन्ट्रल इम्पेरियल होटल
प्रिय भाइ ‘उपेन’
आमालाई र बालाई दण्डवत् !
जया, बासु, कृष्णा, सरस्वती सबैमा स्नेह र नानीहरूमा आशिष ।
सकुशल आज बिहान कलकत्ता आइपुग्यौं । भोलि सभा छ । नेपालका भूतपूर्व राष्ट्रदूत पनि आएका छन् । भेटघाट कुराकानी भयो।
कलकत्ता ठूलाठूला सहरमध्येको एउटा हो । म त दंग परेँ । यता ट्राम उता बास । बिजुलीले चल्ने रेल । लाखौं मोटर । मान्छेको घुइँचो उस्तै । हिँड्न नजाने रोटी पारिहाल्छ ।
आज दिउँसो यहाँको सबैभन्दा नामी सिनेमा हलमा अङ्ग्रेजी पिक्चर हेर्‍यौं । पिक्चर त के र हलै राम्रो । मेट्रो ।
म यता आउँदा बालाई सञ्चो थिएन भन्ने सुनेको थिएँ– चिन्ता लागिरहेछ । मनबहादुरलाई पनि खबर पठाएको थिएँ । आशे होला । म १ ता. सम्म डिगबोई पुग्छु ।
हेर भाइ कविता लेखेको थिएँ र आज कलकत्ता आएँ । पह्रार दिल्ली र नेपाल गएँ । मान्छेले साधना गरे निश्चय सफल हुन्छ । यहाँका मान्छेहरू म आउनाले ज्यादै खुसी भएका छन् । अल इण्डिया कल्चरल एण्ड लिट्रेरी एसोसियसनको सेक्रेटरी हुनुपर्छ भनेर बल गर्दैछन् । बहुत ठूलो भार हो । विचार गर्दैछु । अप्रिल महिनामा फेरि मिटिङ हुन्छ कलकत्तामै । सायद आउनुपर्छ होला– त्यसबेला पनि ।
उपेन, ककाइदेउलाई पनि मेरो स्नेह सुनाइदिनू । सानो नानीलाई खुब सम्झन्छु । मसँग रत्तिसकेको थियो । यो ८/९ दिनमा बिर्सन्छ कि ? हाउडाको पुल हेर्‍यौं। डिगबोईमा रेक्साभन्दा यहाँ मोटर सस्तो छ । मोटरैमा मात्र कुदिँदै छ । ६०.०० पैसामा डेढ–दुई माइल लैजान्छ ।
भोलि दिउँसो बजार हेर्ने विचार छ । भूपेन हाजरिकासँग पनि भेट गर्ने इच्छा छ । हेरौँ ।
ठूली दिदी र सानी दिदी (उद्धवकी आमा) लाई पनि सम्झना भन्नू । ठूलो मन र भूपेनलाई पनि । यतिखेर स्टान्डर्ड ११ बज्न लाग्यो । गुरुभक्त र भीम निदाए ।
भाइ ठूलो भएर तँ अमेरिका र बेलायत जानुपर्छ– त्यस्तो उद्देश्य लिएर पढ् । मान्छेले आँटे सबै पुग्छ ।
३० ता. तिर रत्ना दिदी आउँछिन् होला ! राम्रो यत्न लिनू ! बासु दिदी र रत्ना दिदी एकै दिदी हुन् । कृष्णा दिदी पनि । एउटै आमाका कोखबाट जन्मेर मात्र कोही आफ्नो हुँदैन । बनाउन जाने संसारै आफ्नो– बुझिस् ! नभए आफ्ना पनि बिराना ।
घरमा सबैलाई ईश्वरले मंगलसाथ राखून् । इति ।
श्री हरिभक्त कटुवाल